भुमकलाको ७१ वर्षमा नयाँ घरबारः भन्छिन्, दुवैका दुःख उस्तै रहेछन्, मन मिल्यो अनि ७१ वर्षमा घरबार जोडियो – Online Bichar
Online Bichar 17th February, 2019, Sunday 8:32 AM
दाङ, ५ फागुन । उमेर ७२ तर मुस्कानमा जवानीकै झल्को । हिमालको हिउँजस्तै टन्न मिलेका दाँत, हाँसिरहने बानी । बिहानदेखि साँझसम्म चोयाचेत्राको काम तर कतै देखिँदैन थकानको महसुस । सात दशक पार गरेको संघर्षको पेटारो सित्तिमिति खोल्न मन लाग्दैन उहाँलाई । उल्टै प्रश्न गर्नुहुन्छ– ‘ए, बरै ! पुराना दुःख सम्झेर के हुन्छ र ? आज रमाइलै गरी बितेको छ, यति भए त पुग्यो ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा नरेन्द्र केसीले लेखेका छन् ।